Flim2MM: July 2016
1026 ခုနှစ်လောက်က နော်ဝေးနိုင်ငံကို အခြေပြုထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းပါ။ ရှင်ဘုရင်နတ်ရွာစံတော့ ဘုရင်ဆီမှာ တိတ်တိတ်ပုန်း လသားအရွယ်သားလေးတယောက်ကျန်ပါတယ်။ တိုင်းပြည်အာဏာသိမ်းမယ့်သူတွေက လသားအရွယ် ဘုရင်လောင်းကို လိုက်သတ်ဖိုပကြိုးစားတဲ့အခါ သူရဲကောင်းနှစ်ယောက်က ကလေးကို ကွယ်ပေးရပါတယ်။ ဒီကိစ္စဟာ တိုင်းပြည်ရဲ့ သမိုင်းကြောင်း အပြောင်းအလဲကြီးတခုဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုတော့...
IMDB 6.2 ရနေတဲ့ဇာတ်ကားဟာ ပြသချိန် 1h:39mins ကြာမြင့်ပါတယ်။ 415 MB နဲ့ အောက်ကလင့်ခ်မှာ ဒေါင်းနိုင်ပါပြီ။
Posted by Y Junction at 3:48:00 PM No comments:
Labels: Action, Adventure, Drama, Europe
ဇာတ်ကားကောင်းတကား တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အာဇရိကအနောက်ပိုင်းရှိ နိုင်ငံတနိုင်ငံမှ တိုင်းပြည်မငြိမ်မသက်ဖြစ်နေချိန် အားဂူဆိုသော ကောင်လေးမှ မိသားစုနှင့် ကွဲကွာပြီး ကြေးစားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တခုမှာ ကလေးစစ်သားအဖြစ်ရောက်ရှိခဲ့ပြီး အရွယ်နှင့်မလိုက်အောင် အနိဌာရုံတွေကို ကြုံ့တွေ့ရသော ဇာတ်လမ်းဖြစ်ပါတယ်။ အစိုးရစစ်တပ်က သူ့အဖေနှင့် အစ်ကိုကို သူရှိုဟုစွပ်စွဲကာ သတ်ဖြတ်ခဲ့ကာ သူတယောက်တည်း ကိုယ်လွတ်ရုံးခဲ့ရတဲ့ ကောင်းလေးအတွက် အသက်ရှင်သန်ရေးအတွက် သူပုန်အဖွဲ့သို ရောက်ရှိခဲ့ရပြီး ....
Netflix ကုမ္ပဏီက ပြသဖြန့်ချိမည့် ရုပ်ရှင်ဖြစ်သည့် “Beasts of No Nation” ဖြစ်ကာ ဗြိတိသျှ ရုပ်ရှင်မင်းသား Idris Elba ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသည်။ ဒါရိုက်တာ Cary Fukunaga က ရိုက်ကူးဖန်တီးထားသော ဇာတ်ကားဖြစ်သည်။ အနောက်အာဖရိက မှ ကောင်လေးတစ်ဦးသည် သူ၏ မိသားစုဝင်များ သေဆုံးသွားခဲ့ပြီးနောက် ကလေးစစ်သားအဖြစ်ဖြင့် ကြေးစားတပ်ဖွဲ့တစ်ခုထဲ သွတ်သွင်းခံခဲ့ရပုံကို ရိုက်ကူးထားသော ဇာတ်ကား ဖြစ်သည်။ စာရေးဆရာ Uzodinma Iweala ၏ “Beasts of No Nation” ဝတ္ထုကို အခြေခံ ရိုက်ကူးထားခြင်း ဖြစ်သည်။
IMDB 7.8 ထိရထားတဲ့ ဇာတ်ကားဟာ 2h:17mins ကြာမြင့်ပါတယ်။ 619 MB နဲ့ အောက်ပါလင့်ခ်မှာ ဒေါင်းနိုင်ပါပြီ။
Posted by Y Junction at 10:52:00 AM No comments:
IMDB 6.4 ရရှတဲ့ ဟာသဇာတ်ကားဟာ 1h:34mins ကြာမြင့်ပါတယ်။ 596 MB နဲ့ အောက်ပါလင့်ခ်မှာ ဒေါင်းယူကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ။
အက်ရှင်မင်းသားကြီး Bruce Willis ရဲ့ 2016 အက်ရှင်ဇာတ်ကြမ်းကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ဇာတ်လမ်း အကျဉ်းလေးကတော့ ဘဏ်တခုကို ဓါးပြတိုက်မှုတစ်ခုကနေစတင်ထားပြီး
ဓါးပြမှုမှာ ကျန်ရှိခဲ့တဲ့ သဲလွန်စတွေအကုန်လုံးက ဘဏ်ပိုင်ရှင်နဲ့ သူ့ရဲ့ ပါတနာဖောက်သည်ကို ညွှန်ပြနေမှုကြောင့် FBI က မသင်္ကာဘဲ လိုက်လံစုံစမ်းရာမှ ဘယ်လို အရှုပ်တော်ပုံတွေ ပေါ်ပေါက်လာလေမလဲ ဆိုတာကိုတော့ ပရိတ်သတ်ကြီးကဘဲ ကြည့်ရှူလိုက်ကြပါတော့ခင်ဗျာ။
IMDB 5.4 ရရှိနေဆဲ အက်ရှင်ဇာတ်ကြမ်းဟာ 1h:47mins ကြာမြင့်ပါတယ်။ 482 MB နဲ့ အောက်ပါလင့်ခ်မှာ ဒေါင်းနိုင်ပါပြီ။
Posted by Y Junction at 10:00:00 PM No comments:
Insurgent အဖြစ်အပျက်ကြောင့် တံတိုင်းပြင်ပက ကိစ္စတွေလူတွေသိရှိသွားကြတဲ့အခါ Tris နဲ့ Four တို့အဖွဲ့ဟာ Chicago မြို့ကိုစွန့်ခွာပြီး တံတိုင်းပြင်ပကို ထွက်လာကြပါတယ်။ အဲ့အပြင်ရောက်တော့ Chicago မြို့ကို လူတွေထည့်ပြီး နှစ်ရာပေါင်းများစွာ စမ်းသပ်နေခဲ့တဲ့ အရမ်းကိုတိုးတက်ပြောင်းလဲနေတဲ့ လူတွေကိုတွေ့ရှိခဲ့ရင်းနဲ့မှ ဖုံးကွယ်ထားတာတွေ လိမ်ညာနေတာတွေ ဖြစ်လာ သိလာကြရတယ်။ အဲအပြင် Chicago မှာလည်း တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပျက်နေတဲ့အတွက် Tris ဟာ စွန့်စားပြီး အလွန်ခက်ခဲ့တဲ့ ရွေးချယ်စရာတွေ ကြုံတွေ့လာရပါတယ်။
IMDB 5.8 ရရှိနေတဲ့ဇာတ်ကားဟာ 2h:00mins ကြာမြင့်ပါတယ်။ 574 MB နဲ့ အောက်ပါလင့်ခ်မှာ ဒေါင်းယူနိုင်ပါပြီ။
Posted by Y Junction at 8:51:00 AM No comments:
Labels: Action, Adventure, Hollywood, Mystery
Hahou Mo ဟာ သိုင်းပညာသင်ကြားပြသပေးနေတဲ့ ဆရာတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီိး လူတစ်ယောက်ကို မတော်တဆသတ်လိုက်မိတဲ့အတွက်ကြောင့် ထောင်ကျနေသူတစ်ယောက်ပါ။ တစ်ရက်တော့ ထောင်ထဲမှာ TV ကြည့်နေတုန်း လူတစ်ယောက်သတ်ခံလိုက်ရတဲ့သတင်းကို ကြားလိုက်မိပါတော့တယ်။ သူဟာ ထိုလူသတ်မှုအကြောင်းကို သိပြီး ထိုအမှုကို စုံစမ်းနေတဲ့ စုံထောက် Luk Yuen-Sum ကို သူ ကူညီပေးမယ်လို့ ဆိုလိုက်ပါတယ်။ kung fu jungle 1 Fung Yu-Sau ဟာ သိုင်းပညာကို ကျွမ်းကျင်စွာ တတ်မြောက်တတ်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး သိုင်းပညာရှင်တွေထဲမှာမှ နံပါတ် ၁ ဖြစ်ချင်နေသူဖြစ်ပြီး သူ့ရဲ့ စိတ်ရူးကြောင့် တခြားသိုင်းပညာကို ကျွမ်းကျင်စွာ တတ်မြောက်ထားသူတွေကို ယှဉ်ပြိုင်ပြီး ရက်စက်စွာ သတ်ဖြတ်နေပါတော့တယ်။ Hahou Mo နဲ့ စုံထောက် Luk Yuen-Sum တို့ဟာ လူသတ်သမားကို ရှာဖွေနေသော်လည်း မဖမ်းဆီးနိုင်သးဘူးဖြစ်နေပါတော့တယ်။ ထိုအတော်အတွင်း Hahou Mo မှာ ဇာတိမြေကို ပြန်ရောက်သွားပြီး ထိုမှတစ်ဆင့် လူသတ်သမား Fung Yu-Sau အကြောင်း အနည်းငယ်စုံစမ်းမိပါတော့တယ်။ kung fu jungle2Fung Yu-Sau ရဲ့ အိမ်ကို စုံထောက် Luk Yuen-Sum တို့ဝင်ရောက်ရှာဖွေရာမှတစ်ဆင့် ထိုနေ့ဟာ Fung Yu-Sau ရဲ့ ဇနီးဆုံးတာ နှစ်ပတ်လည်နေ့ဖြစ်မှန်း ရိပ်မိပြီး စောင့်ဖမ်းဖို့ ကြံစည်ပါတော့တယ်။ တကယ်တမ်းလက်တွေ့မှာတော့ Fung Yu-Sau ရဲ့ သိုင်းပညာကျွမ်းကျင်မှုနဲ့ အတူ Hahou Mo ရဲ့ မသင်္ကာဖွယ် အပြုအမှုတစ်ချို့ကြောင့် အလွဲလွဲချော်ချော်ဖြစ်ကာ စုံထောက် Luk Yuen-Sum တို့ အဖွဲ့ပဲ ဒဏ်ရာအများအပြားရကာ ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတော့တယ်။ တကယ်တော့ Fung Yu-Sau နဲ့ Hahou Mo ဟာ ထိုလူသတ်မှုဖြစ်ရက်တွေမတိုင်ခင်က တစ်ခေါက်တွေ့ဆုံထားဖူးခဲ့ပြီး သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ လျို့ဝှက်ချက်က ဘာဖြစ်မလည်း . . . . . kung fu jungle3အက်ရှင်သိုင်းကား ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့သူတွေ အကြိုက်တွေ့မယ့် ဇာတ်ကားလေးဖြစ်ပြီး အထူးသဖြင့် ဖိုက်တင်ခန်းတွေက ပိုပြီး ရန်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် ပေးစွမ်းနိုင်မှာပါ။ တချို့အခန်းတွေတော့ အနည်းငယ်ရက်စက်တယ်လို့ထင်ရပြီး အခန်းအများစုကတော့ ကြည့်လို့အဆင်ပြေမှာပါ။ ဒါရိုက်တာ Teddy Chan က အကောင်းဆုံး ရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားပြီး Ip Man ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားမှ Donnie Yen, Charlie Yeung, Baoqiang Wang တို့ အဓိကပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။
ရုပ်ရှင်အညွှန်း - MM Movie Guide
IMDB 6.5 ရထားတဲ့ ဇာတ်ကားဟာ 1h:40mins ကြာမြင့်ပါတယ်။ 454 MB နဲ့ အောက်ပါလင့်ခ်မှာ ဒေါင်းယူနိုင်ပါပြီ။
ဒီဇာတ်ကားတော့ Amitabh Bachchan ရဲ့
ဇာတ်လမ်းကတော့ ပြန်ပေးဆွဲခံရတဲ့ ၈ နှစ်အရွယ်မြေးမလေးအတွက် ၈ နှစ်တိုင်တိုင်
ပူဆွေးသောကရောက်နေတဲ့ ဂျွန် ဟာ တနေ့မှာတော့ မိဘမဲ့ ဂေဟာက ကလေးမလေးတယောက်ရဲ့
ဦးထုပ်ကနေ တဆင့် ပြန်ပေးသမားကိုခြေရာခံမိတယ်..။
အဲဒီ အချိန်မှာပဲ နောက်ထက် ၈ နှစ်အရွယ်ကလေးတယောက် ပြန်ပေးဆွဲခံရပြန်တယ်။
တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပဲ လွန်ခဲ့တဲ့ ၈ နှစ်ကပြန်ပေးမှုနဲ့ တူညီနေတာပါပဲ....
ဇာတ်လမ်းမှာ ဂျွန်ဟာ သူတယောက်တည်းပြန်ပေးသမားကို ခြေရာခံမိဖို့ ဘယ်လောက်ရုန်းကန်ခဲ့ပြီး..။
ရဲ တွေကရော ဒီပြန်ပေးအမှုနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ဂျွန် ရဲ့ဖော်ထုတ်မှုကို လက်ခံရဲ့လား...။
နောက်ဆုံး ဒီပြန်ပေး ၂ မှုလုံးကိုဖော်ထုတ်နိုင်ရဲ့လားဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းကောင်းနဲ့ ရှုစားရမှာပါ။
ဘောလီဝုဒ် ဇာတ်ကားတွေမှာထူးထူးခြားခြားဇာတ်ကားလည်းဖြစ်ပါတယ် မကြည့်ရသေးဘူးဆိုရင် ကြည့်ဖြစ်အောင်ကြည့်ကြဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေ....
ရုပ်ရှင်အညွှန်း - ချမ်းငြိမ်း
IMDB 7.4 ရနေတဲ့ ဇာတ်လမ်းဟာ 2h:16mins ကြာမြင့်ပါတယ်။ 574 MB နဲ့ အောက်ကလင့်ခ့်မှာ ဒေါင်းယူနိုင်ပါပြီ။
Posted by Y Junction at 9:29:00 AM No comments:
Posted by Y Junction at 7:35:00 AM No comments:
Posted by Y Junction at 8:21:00 AM No comments:
အိန္ဒိယတောင်ပိုင်းမှာ နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားသူတွေ သတ်ဖြတ်လုပ်ကြံခံရနေမှုဟာ ပုံမှန်လိုဖြစ်နေပါတယ်။ ဒါတွေကို ကြိုးကိုင်နေသူကတော့ သန်ဒါဝမ်ဆိုသူဖြစ်နေပါတယ်။ သူကတော့ အစိုးရပိုင်းလူကြီးတွေနဲ့ အဆက်အသွယ်ရှိပြီး လူကြီးပိုင်းတယောက်ဖြစ်နေတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ လူမိုက်တွေကို အမြောက်အများမွေးထားပြီး အလုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်ရှိရင် အသုံးချပါတယ်။ သူ့ရဲ့လုပ်ကြံသတ်ဖြစ်မှုတွေမှာ မထင်မှတ်တဲ့ ကြီးမားတဲ့ အနှောင့်အယှက်တခုရှိပါတယ်။ ငွေတိုးချေးစားတဲ့ ဗာဆူဆိုတဲ့ လူငယ်တယောက်နဲ့ သူ့မိသားစုဖြစ်နေပါတယ်။ ကဲ ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာကတော့
ဒါရိုက်တာကတော့ ဘောလီးဝုဒ်မှာ အက်ရှင်ကားတွေကို ဦးစားပေးရိုက်တဲ့ Hari ဖြစ်ပါတယ်။ ကင်မရာရိုက်ချက်တွေကတော့ လန်ထွက်ပဲ။ ဇာတ်လမ်းထဲက ဖိုက်တင်ခန်းတွေဆိုရင်ဗျာ ကြမ်းချက်။ တရုတ်စတီးကြိုးတွေကို သနားတယ်ပြောရမယ်။ ကဲကဲ ဒေါင်းကြည့်ကြပါဦး။
IMDB 5.1 ရထားတဲ့ အက်ရှင်ဇာတ်ကြမ်းဟာ 2h:34mins ကြာမြင့်ပါတယ်။ 717 MB နဲ့ အောက်ပါလင့်ခ်မှာ ဒေါင်းနိုင်ကြပါပြီ။
Posted by Y Junction at 7:40:00 AM 1 comment:
နယူဇီလန်ကျွန်းက ပင်ရင်းလူမျိုးတွေကို အခြေခံထားတဲ့ လူရိုင်းဇာတ်ကားကောင်း တကားတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဘိုးဘေးတွေကိုလေးစားပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးကို လိုလားတဲ့ မာအိုရီရွားသူကြီးနဲ့ သူ့လူမျိုးစုဟာ အခြားမဟာမိတ်လူမျိုးစုတစုရဲ့ သစ္စာဖောက်ခြင်းကို ခံရပြီး အသက်ခံရပါတယ်။ ဆယ်ကျော်သက်သာရှိသေးတဲ့ ရွာသူကြီးရဲ့သားအနေနဲ့ ပြန်ကလဲ့စားချေဖို့နဲ့ သူ့လူမျိုးဂုဏ်သိက္ခာကို ပြန်လည်ဖေါ်ဆောင်ဖို့ တာဝန်ရှိတဲ့ တဦးတည်းသောသူဖြစ်လာပါတယ်။ ငယ်ရွယ်လွန်းပြီး အတွေ့အကြုံနုတဲ့ သူ့နေနဲ့ တာဝန်ကို ဘယ်လိုထမ်းဆောင်မလဲဆိုတာကိုတော့....
IMDB 6.4 ရထားတဲ့ လူရိုင်းဇာတ်ကားဟာ 1h:47mins ကြာမြင့်ပါတယ်။ 485 MB နဲ့ အောက်ကလင့်ခ်မှာ ဒေါင်းနိုင်ပါပြီ။
Posted by Y Junction at 12:38:00 PM No comments:
Labels: Action, Europe
လာကင် လို့ခေါ်တဲ့ ရက်စက်တဲ့မူးယစ်ရာဇာကို ဖမ်းဖို့ FBI ရဲ့ အမျိုးသမီးအထူးအေးဂျင့် အက်ရ်ှဘန်းဟာ ဘော်စတွန်မြို့ကို ရောက်ရှိလာပါတယ်။ ဘော်စတွန်မြို့ ခပ်ကြမ်းကြမ်း ရဲအရာရှိ မူလင်စ်နဲ့ အက်ရ်ဘန်းတို့ တယောက်နဲ့တယောက်မတည့်ပဲ အလုပ်သဘောနဲ့ အတူတူ အမှုလိုက်နေခဲ့ပါတယ်။ အမှုကွင်းဆက်တခုစီကိုလိုက်တိုင်း နှစ်ယောက်သား မညီမညာနဲ့ ဖြစ်နေပြီး အဲ့ဒီပုံစံနဲ့ လာကင်ကို ဘယ်လိုဖမ်းမလဲဆိုတာကိုတော့....
မင်းသမီး ဆန်ဒရာဘူးလော့ခ် နဲ့ SPY ကားထဲက ဟာသမင်းသမီး Melissa McCarty တို့ ဦးဆောင်ပါဝင်ထားတဲ့ ဟာသ အက်ရှင်ဇတ်ကားဟာ IMDB 6.6 ရရှိထားပြီး 1h:57mins ကြာမြင့်ပါတယ်။ 547 MB နဲ့ အောက်ကလင့်ခ်မှာ ဒေါင်းယူကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ။
Posted by Y Junction at 3:56:00 AM No comments:
အလုပ်အားရက်တွေဆို ရုပ်ရှင်တွေပိုပြီးတင်ပေးချင်ပေမယ့်လည်း ကားအသစ်တွေမရှိတော့ ကားအဟောင်းတွေပဲ တင်ရတာပေါ့ဗျာ။ မကြည့်ရသေးတဲ့သူတွေရှိရင် ဒေါင်းကြည့်ကြပေါ့။
ရုပ်ရှင်ပိုစတာကိုကြည့်တာနဲ့ ဘယ်သူ့ကားလဲ၊ ဘယ်လောက်ကြမ်းလဲဆိုတာ့ သိကြမှာပါ။ ဇာတ်လမ်းကိုတော့ မပြောပြနိုင်တော့ပါဘူးနော် (ပျင်းလို့)
IMDB 5.3 ရထားတဲ့ ထိုင်းဇာတ်ကြမ်းဟာ 1h:44mins ကြာမြင့်ပါတယ်။ 455 MB နဲ့ အောက်ကလင့်ခ်မှာ ဒေါင်းနိုင်ပါပြီ။
Labels: Action, Asia
sniper မင်းသာကြီး Tom Berenger ရဲ့ နောက်ဆုံးထွက် sniper ဇာတ်လမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတခါတော့ အချိန်အကြာကြီးဝေးကွာနေခဲ့ရတဲ့ သူ့ရဲသားလည်းပါဝင်ပါတယ်။
တချိန်က စစ်ဆင်ရေးတခုမှာ မှားယွင်းတဲ့ အမိန့်တခုကြောင့် အချင်းချင်းပစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ခဲ့ပြီး တပ်စုတစုကျသွားပါတယ်။ အဲ့ဒီတပ်စုမှာ မသေပဲကျန်ခဲ့တဲ့ စနိုက်ပါသမားတယောက်ကျန်ရစ်ပါတယ်။ စစ်ဆင်ရေးရဲ့ တာဝန်ရှိသူ စစ်ဘက်ဆိုင်ရာအကြီးအကဲတွေဟာ သူတို့ကို လုပ်ကြံခဲ့တယ်လို့ထင်ပြီး အရာရှိတွေကို တယောက်ပြီးတယောက်လိုက်သတ်ပါတော့တယ်။
ဘရန်ဒန်ဆိုတဲ့ ဆီးရီးယားနိုင်ငံမှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ စနိုက်ပါသမား ဘရန်ဒန်ဟာ လူသတ်သမားကိုရှင်းဖို့ လျှို့ဝှက်တာဝန်ပေးခံရပါတယ်။ ပါးနပ်လွန်းတဲ့ လူသတ်သမားကို အမဲလိုက်ရမှာတော့ ဘရန်ဒန် တင်မကပါဘူး။ သူ့ အထက်လူကြီး ၊ လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဖက် အမျိုးသမီး စနိုက်ပါ နဲ့ သေသွားပြီးလို့ အများထင်ထားတဲ့ သူ့အဖေ စနိုက်ပါအိုးဆားဗစ်ကြီးပါ ပါဝင်ရပါတယ်။ ကဲ ဘယ်လိုဇတ်လမ်းမျိုးလဲဆိုတာကိုတော့ ဆက်လက်ရှုစားကြပါဦးလို့.....
IMDB 5.3 ရထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းဟာ 1h: 35mins ကြာမြင့်ပါတယ်။ 445MB နဲ့ အောက်ပါလင့်ခ်မှာ ဒေါင်းယူကြည့်ရှုခံစားနိုင်ပါပြီ။
Labels: Action, Hollywood, Thriller, War
ကားကောင်းလေးတကားပါ။ ကောင်မလေးက သူ့အဖေနဲ့ အပြင်ထွက်လည်နေတုန်း ရုတ်တရတ်ပျောက်ဆုံးသွားပါတယ်။ အဖေနဲ့ အမေနဲ့က ကွဲနေပြီး အမေရဲ့ နောက်အိမ်ထောင်ဖက်ကတော့ မှုခင်းစုံစမ်းရေးမှူကြီးတဦးဖြစ်ပါတယ်။
ကောင်မလေးပျောက်သွားတုန်းက သူ့အဖေနဲ့ အတူ သူ့အဖေသူငယ်ချင်းပါ အတူတူရှိနေပါတယ်။ တဖက်က သူ့အမေကလည်း အရက်စွဲနေတဲ့သူဖြစ်ပြီး ကောင်မလေးကို ဂရုမစိုက်နိုင်ပါဘူး။ ရဲမှူးနဲ့ အိမ်ထောင်ရေးကလည်း အဆင်မပြေတဲ့အချိန် ကောင်မလေးရုတ်တရတ်ပျောက်ဆုံးမှုဟာ ဘယ်သူ့လက်ချက်လဲ ဘယ်သူလုပ်တာလဲဆိုတာ ဇာတ်အိမ်ကောင်းကောင်းနဲ့ တဆင့်ချင်း ဖေါ်ပြသွားတဲ့ ရုပ်ရှင်ကောင်းတလက်ပါ။
ဒီဇာတ်လမ်းကိုကြည့်ရင် လူတွေရဲ့လောဘ၊ အတ္တကြီးမှုတွေကို ကြောက်စရာကောင်းအောင်တွေရမှာပါ။
သရုပ်ဆောင်တွေအားလုံး ပီပြင်ကြပါတယ်။ သဘောအကျဆုံး သရုပ်ဆောင်နှစ်ယောက်ရှိပါတယ်။ ကလေးပျောက်တော့ ပထမဆုံး ရဲစခန်းမှာ တိုင်ချက်ဖွင့်တဲ့အခါ သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်အရစ်ခံရပါတယ်။ အဲ့ဒီအခန်း အရစ်သန်တဲ့စခန်းမှူးကိုကြည့်ကြည့်ပြီး နရင်းရိုက်ချင်စိတ်တွေ ဖြစ်လာအောင် သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ ဒုတိယတယောက်ကတော့ အရုပ်မျက်နှာဖုံးရောင်းတဲ့သူရဲ့ အဒေါ်ဆိုသူဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရုပ်ကို သေသေချာချာကြည့်ရင် သရုပ်မဆောင်တတ်သလို၊ ဘာမှမသိတဲ့ အရိုးခံကြီးလိုလို သရုပ်ဆောင်သွားတဲ့ ပုံစံတွေဟာ ပီပြင်တယ်ပြောရမှာပါ။
IMDB 8.2 ရနေဆဲ လျှို့ဝှက်သဲဖို ထောက်လှမ်းရေး ဇာတ်ကားဟာ 2h:8mins ကြာပါမယ်။ အောက်ပါလင့်ခ်မှာ 572 MB နဲ့ ဒေါင်းနိုင်ပါပြီ။
Posted by Y Junction at 5:15:00 AM No comments:
Posted by Y Junction at 11:22:00 AM No comments:
ဘောလီးဝုဒ် မင်းသားကြီး Akshay Kumar ဂိုဏ်းစတားဇာတ်လမ်းတပုဒ်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ IMDB 4.9 ရထားတဲ့ဇာတ်ကားဟာ ပြသချိန် 2h:40mins ကြာမြင့်ပါတယ်။ 679 MB နဲ့ အောက်ကလင့်ခ်မှာ ဒေါင်းနိုင်ပါပြီ။
အထူးရဲတပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ဒေးဗစ်ဟန်းဒရစ်နဲ့ သတင်းထောက်ကိုထိုးလို့ ဒဏ်ပေးခံရတဲ့ နာမည်ကြီး ရုပ်ရှင်မင်းသား ဘရိုဒီဝေါ်ကာ တို့အထူးရဲ လေ့ကျင့်ရေးစခန်းကို သွားရောက်နေစဉ်မှာပဲ အဲ့ဒီနေရာမှာထားတဲ့ ငွေလက်မှတ်တွေကိုရှိဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ အကြမ်းဖက်အဖွဲ့နဲ့ ထိပ်တိုက်တွေ့ပြီး ပစ်ခတ်ကြတဲ့ ဇာတ်လမ်းပါ။ ကျွန်တော်ရေးသလောက်တော့ မရိုးရှင်းဘူးပေါ့။ လှည့်ကွက်လေးတွေ တွေ့ရဦးမှာ ပါ။
IMDB 5.8 ရထားတဲ့ အက်ရှင် ဇာတ်လမ်းဟာ 1h:50mins ကြာမြင့်ပါတယ်။ 513 MB နဲ့ အောက်ကလင့်ခ်မှာ ဒေါင်းယူကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ။
Posted by Y Junction at 2:37:00 AM No comments:
2016 ဘောလီးဝုဒ် သဲထိတ်ရင်ဖိုဇာတ်ကားလေးကို တင်ဆက်လိုက်ပါပြီ။ ဘာလာဆိုတဲ့ လူမှုရေး အလုပ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ ကောင်လေးဟာ သူ့ဖခင်သဘောကို ဆန့်ကျင်ပြီး ပရီယာဆိုတဲ့ ကောင်မလေးကို လက်ထပ်လိုက်ပါတယ်။ သူတို့ဘဝပုံမှန်ဖြတ်သန်းနေတုန်းမှာပဲ ပရီယာဆီမှာ မူမမှန်တဲ့ အကျင့်လေးတွေပေါ်လာပါတယ်။
ပရီယာဟာရဲ့ အမေဟာ သူမကို ကိုယ်ဝန်လွယ်ထားစဉ်က စိတ်ကစဉ့်ကလျားဖြစ်နေခဲ့ပြီး သူမကို မွေးဖွားပြီး သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ ပရီယာဟာ သူ့အမေလိုဖြစ်သွားမှာ သိပ်ကြောက်နေပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း သူမရဲ့ အမူအကျင့်တွေ စိတ်ထားတွေက တဖြည်းဖြည်း ပြောင်းလဲလာပါတယ်။ ညညဆို အိမ်မက်ထဲမှာ သူ့ အမေကိုမြင်တယ်၊ စကားပြောတယ်၊ ညဘက်အိပ်ရင်းလမ်းလျှောက်တယ်။ နောက်ပိုင်းမှ ဘာလာက ပရီယာရဲ့ အခြေအနေကို ရိပ်မိသွားပြီး ဘာကြောင်းဖြစ်တာလဲဆိုတာကို သိဖို့ကြိုးစားရာကနေ......
IMDB 6.5 ရထားတဲ့ ဘောလီးဝုဒ် သဲထိတ်ရင်ဖိုဇာတ်ကားဟာ ပြသချိန် 2h:39mins ကြာမြင့်ပါတယ်။ 626 MB နဲ့ အောက်ပါလင့်ခ်မှာ ဒေါင်းယူကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ။
Posted by Y Junction at 9:44:00 PM No comments:
1971 ခုနှစ်ကိုအခြေခံထားတဲ့ စစ်အက်ရှင်ကားကို ဒီညတင်ပေးလိုက်ပါပြီ ။ မင်းသားကတော့ Jack O'Connell ဖြစ်ပြီး၊ IMDB 7.1 အထိရရှိနေဆဲဇာတ်လမ်းဖြစ်လို့ ဇာတ်လမ်းကောင်းလို့ ညွှန်းလိုက်ပါရစေ။
မြောက်အိုင်ယာလန်နိုင်ငံက ဘဲဖက်မြိုပေါ်မှာဖြစ်တဲ့ လမ်းပေါ်က အထိကရုန်းမှာ ဗြိတိန်စစ်သားငယ်တယောက်ဟာ သူ့တပ်ဖွဲ့နဲ့ကွဲသွားပြီး မငြိမ်းချမ်းတဲ့ နယ်မြေထဲမှာ တယောက်တည်း ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အခက်အခဲတွေကြားထဲကနေ သူ့အိမ်ကိုပြန်မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီး ဘယ်လိုအိမ်ပြန်မှာလဲဆိုတာကိုတော့.....
1h:39 မိနစ်ကြာတဲ့အက်ရှင်ကားကို 458 MB နဲ့ အောက်ကလင့်ခ်မှာ ဒေါင်းယူကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ။
ဒီနေ့အတွက်တော့ ချောက်ချားစရာ အိန္ဒိယဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။
ဒီဇာတ်ကားက ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေတုန်းက လူကြိုက်များခဲ့တဲ့ 1920 ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားရဲ့ ဒုတိယတွဲဖြစ်ပါတယ် ။
ရှီဗန်ဂီဆိုတဲ့ အမျိူးသမီးဟာ သူ့ချစ်သူနဲ့အိမ်ထောင်ကျပြီး မကြာခင်မှာပဲ ယောက်ျားဖြစ်သူ ဗီးယားကဟာ အဖျက်အမှောင့်တစ်ခုကြောင့် ရောဂါဆိုးတစ်ခု စွဲကပ်ခဲ့ပါတယ်။
သူ့ရဲ့ရောဂါဟာရုပ်အင်္ဂါတွေ ပြောင်းလဲပြီး ကြောက်စရာအသွင်ဖြစ်သွားခဲ့လို့ ဆေရုံတင်ပြီးကုသခဲ့ပေမယ့်မပျောက်ကင်းတာကြောင့် နောက်ဆုံးမှာ ပယောဂဆရာတစ်ဦးရဲ့ အကူအညီကိုရယူရပါတယ်။
အဲ့ဒီပယောဂဆရာက ရှီဗန်ဂီရဲ့ ချစ်သူဟောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး သူ့အကူအညီကို မယူလို့ မဖြစ်တာကြောင့် နောက်ဆုံးမှာ သူကိုယ်တိုင်အကူအညီတောင်းခဲ့တာကြောင့် ချစ်သူဟောင်းဂျေးဟာ သူ့ကိုကူညီဖို့ဖြစ်လာပါ တယ်။
တကယ်တော့ ဂျေးနဲ့ရှီဗန်းဂီးတို့ နှစ်ဦးကြားမှာ ချစ်သူဘ၀က အထင်လွဲစရာ ပြဿနာ ကြီးကြီးမားမားဖြစ်ခဲ့ပြီး လမ်းခွဲခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။
ဂျေးဟာ ချစ်သူဟောင်းရဲ့ ယောက်ျားကို ကူညီဖို့သူကိုယ်တိုင်သွားကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ အဲ့ဒီလူမှာ မကောင်းဆိုးရွားတစ်ကောင် ကပ်တွယ်နေပြီး အဲဒီ မကောင်းဆိုးရွားကပ်တွယ်နေတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ဟာ သေလုမြောပါးဖြစ်နေပါတယ်။
ဒီအခြေအနေမှာ ဂျေးက အဲဒီ မကောင်းဆိုးရွားကို ဖယ်ထုတ်ဖို့ သူ့ချစ်သူဟောင်းနဲ့ အတူကြိုးပမ်းတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီဇာတ်လမ်းက ဒီလောက် တော့ မရိုးစင်းပါဘူး။ ဒီအမျိုးသားကို တွယ်ကပ်နေတဲ့ မကောင်းဆိုးရွားဟာ တစ်စုံတစ်ဦးရဲ့ စေခိုင်းမှုကြောင့်ဖြစ်ပြီး အဲဒီသူကိုတော့ ဇာတ်လမ်းရဲ့တစ်ဝက်လောက်မှာမှသိရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဇာတ်ကားမှာ နာမည်ကျော်3IDIOT ဇာတ်ကားထဲက သူငယ်ချင်းအဖြစ် သရုပ်ဆောင်တဲ့ ရှာရ်မန်းဂျိူရှိက အဓိကသရုပ်ဆောင်အဖြစ် ပါဝင်ထားပါတယ်။
ရုပ်ရှင်အညွှန်း -7Day Daily
မကြာခင်ကမှရုံတင်ထားတဲ့ ဘောလီးဝုဒ်သရဲကားဟာ 2h ကြာမြင့်ပါတယ်။ 754 MB နဲ့ အကြည်တင်ထားပေးပါတယ်။ အောက်မှာ ဒေါင်းယူကြည့်ရှုကြပါကုန်...
Posted by Y Junction at 7:20:00 PM No comments:
သေသွားတဲ့လူရဲ့ မှတ်ဥာဏ်ကို အသက်ရှင်နေတဲ့သူဆီကို ထည့်ပေးထားတဲ့ စိတ်ဝင်စားဖွယ် ဇာတ်ကားကောင်းတလက် ဖြစ်ပါတယ်။ CIA ရဲ့ လျှို့ဝှက်အေးဂျင့်တယောက်ဟာ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေစဉ်အတွင်း သေဆုံးသွားပါတယ်။ သူ့မှာ ဇနီးနဲ့ သမီးတယောက်ကျန်ရှိပါတယ်။ သူ့ရဲ့တာဝန်ကတော့ ကမ္ဘာအရပ်ရပ် ဦးတည်ထားတဲ့ ဒုံးကျည်တွေကို ပစ်ခတ်နိုင်ဖို့ ရေးဆွဲထားတဲ့ ပရိုဂရမ်ကို ဒတ်ရ်ှဆိုတဲ့သူဆီက အကြမ်းဖက်သမားတွေထက်ဦးအောင် ရယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒတ်ရ်ှဘယ်မှာပုန်းနေတယ်၊ ပေးဖို့ပိုက်ဆံတွေဘယ်မှာ သိမ်းထားလဲဆိုတာကို သူတယောက်ပဲ သိပေမယ့် သေဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ မျှော်လင့်ချက်မဲ့နေတဲ့ CIA အတွက် ဂျူရီချိုဆိုတဲ့ ကြမ်းတမ်းလှတဲ့ ထောင်ထဲက ရာဇဝတ်ကောင်ဟာ ကောက်ရိုးတမျှင် ဖြစ်လာပါတယ်။ သေဆုံးသူ အေးဂျင့်ရဲ့ မှတ်ဥာဏ်တွေ ကို ဂျူရီချိုရဲ့ မှတ်ဥာဏ်ထဲကို ထည့်သွင်းပေးပြီး မပြီးဆုံးသေးတဲ့ တာဝန်ကို ဆက်လက်ထမ်းဆောင်ရန်ဖြစ်ပါတယ်။
လူရမ်းကား ဂျူရီချိုအနေနဲ့ တာဝန်ကိုဘယ်လိုဆက်လက်ထမ်းဆောင်မလဲ ၊ ခံစားချက်မဲ့တဲ့ ဂျူရီချိုအနေနဲ့ မှတ်ဥာဏ်ပေါ်မူတည်ပြီး ဇနီးနဲ့ သမီး အပေါ် သံယောဇဉ်တွေဖြစ်သွားနိုင်လား ဆိုတာကိုတော့.....
နာမည်ကြီး အက်ရှင်မင်းသားကြီး Kevin Costner ရဲ့ ဇာတ်ကြမ်းကားသစ်ဟာ IMDB 6.3 ရထားတဲ့ ဇတ်ကားရရှိထားပြီး 1h:53mins ကြာမြင့်ပါတယ်။ 508 MB နဲ့ အောက်ကလင့်ခ်မှာ ဒေါင်းယူကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ။
Posted by Y Junction at 3:48:00 AM No comments:
တောထဲမှာကျားဖြူကိုက်လို့ဆုံးပါးသွားတဲ့ ဓါတ်ပုံဆရာအစ်ကိုအတွက် ညီဖြစ်သူက လက်စားချေဖို့ အဖွဲ့လိုက် တောထဲကို စွန့်စားသွားရောက်တဲ့အခါမှာတော့. ..
IMDB 5.8 ရထားတဲ့ ဘောလီးဝုဒ်တောတွင်း စွန့်စားဇာတ်လမ်းဟာ2h: 3mins ကြာမြင့်ပါတယ်။ 582 MB နဲ့အောက်ပါလင့်ခ်မှာ ဒေါင်းနိုင်ပါပြီ။
Posted by Y Junction at 11:09:00 AM No comments:
Posted by Y Junction at 11:44:00 PM No comments:
မနက်ဖြန်အလုပ်ပိတ်ပြီဟုတ်၊ သဲထိတ်ရင်ဖိုဇာတ်ကားကောင်းလေး တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
နှစ်စဉ် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက ဆေးရုံ၊ မီးသတ်ဌာနနဲ့ ရဲစခန်းတွေကို ၁၂ နာရီကြာ ပိတ်တဲ့ ညမှာဖြစ်ပါတယ်။ ရာဇ၀တ်မှုတွေကို တရားဝင်ကျူးလွန်ခွင့်ရတဲ့ ညမှာ လင်မယားနှစ်ယောက်ဟာ သူတို့ကလေးတွေရှိရာအိမ်ကိုကားမောင်းပြီးပြန်လာတာဖြစ်ပြီး ကားက လောင်စာပြတ်သွားတဲ့အခါ ဆိုင်ကယ်စီး မျက်နှာဖုံးဝတ်လူဆိုးတွေ ရန်ကနေ ရှောင်ပြေးရတာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ့အချိန်မှာပဲ သူ့သားကို သတ်တဲ့သူကို ကလဲ့စားလိုက်ခြေလိုတဲ့စိတ်နဲ့လမ်းပေါ်ထွက်လာတဲ့ လူတစ်ယောက်၊ အိမ်ဖျက်ဆီးခံရလို့ထွက်ပြေးလာတဲ့ သားအမိနှစ်ယောက်နဲ့တွေ့ဆုံကြပြီး Los Angeles က မင်းမဲ့ဇရိုက်ညမှာ သူတို့ငါးရောက်ရှင်သန်ကျန်ရစ်ဖို့အတွက် ရုန်းကန်ရတာဖြစ်ပါတယ်။
The Purge: Anarchy ဟာအမေရိကန် စွန့်စားခန်း/ထိပ်လန့်သည်းဖိုဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ ဒါရိုက်တာက James DeMonaco ဖြစ်ပြီး ၂၀၁၃ ခုနှစ် The Purge ရဲ့ နောက်ဆက်တွဲဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ သရုပ်ဆောင်တွေကတော့ Frank Grillo, Zach Gilford, Kiele Sanchez, Michael K. Williams, Carmen Ejogo နဲ့ Billy Parker တို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဇူလိုင်လ ၁၈ ရက်နေ့ထွက်ဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။
IMDB 6.5 ရထားတဲ့ သဲထိတ်ရင်ဖိုဇာတ်ကားဟာ 1h:43mins ကြာမြင့်ပါတယ်။ 475.3 MB နဲ့ အောက်ကလင့်ခ်မှာ ဒေါင်းယူကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ။
Posted by Y Junction at 6:49:00 AM No comments:
Time Travel နဲ့ ပက်​သက်​ပြီး စိတ်​ဝင်​စားတဲ့ သူငယ်​ချင်း​တွေ အတွက်​ IMBd rating 8.5 အထိ​တောင်​ ရရှိဲထားတဲ့ Science Fiction အမျိုးအစား India movie ​လေးနဲ့ မိတ်​ဆက်​​ပေးချင်​ပါတယ်​
ဒီ 24 ဆိုတဲ့ ကား​လေးကို ဒါရိုက်​တာ Vikram Kumar က ရိုက်​ကူးခဲ့ပြီး Suriya က သုံးကိုယ်​ခွဲ သရုပ်​​ဆောင်​ထားတာဖြစ်​ပါတယ်​
ဒီရုပ်​ရှင်​​လေး က 2009 ခုနှစ်​ကတည်းက ရိုက်​ဖို့ စီစဉ်​ထားတာဖြစ်​​ပေမယ့်​ အ​ကြောင်းအမျိုးမျိုး​ကြောင့်​ ပျက်​ခဲ့ပြီး 2014 ခုနှစ်​မှ ရိုက်​ကူးနိုင်​ခဲ့ပြီး 2016 May လ6ရက်​​နေ့က ထွက်​ရှိခဲ့တာ ဖြစ်​ပါတယ်​
ဒီကား​လေးထဲမှာ သိပ္ပံပညရှင်​ Dr. Sethuraman အဖြစ်​ Suriya က သရုပ်​​ဆောင်​ထားပြီး၊ သူသည်​ ၁၉၉၀ ဇန်​န၀ါရီ မှာ အများဆုံး ၂၄နာရီစာ ​ခေတ်​ ​ရှေ့​နောက်​ပြန်​သွားလို့ရတဲ့ နာရီ တလုံးကို တီထွင်​ခဲ့တယ်​။
အဲ့ မှာ သူ့ရဲ့ အမွှာ ညီအကို က သူ့ရဲ့ နာရီကို ခိုးဖို့ ကြိုးစား ရာက​နေ သူ့ရဲ့ နာရီ ​ကော အခိုးခံခဲ့ရလား၊ သူ့ရဲ့ နာရီက​ကော ဘယ်​လို အချိန်​ကို ​ရှေ့​နောက်​ ပြန်​ချိန်​လို့ရလဲ ဆိုတာကို​တော့ ဇာတ်​လမ်း​လေးထဲမှာ ဆက်​လက်​ခံစား​ပေးပါ​နော်​
IMDB-8.5 ရရှိနေတဲ့ ဘောလီးဝုဒ်ဇာတ်ကားဟာ 2h:44mins ကြာမြင့်ပါတယ်။ 772 MB နဲ့ အောက်ကလင့်ခ်မှာ ဒေါင်းယူကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ။
Posted by Y Junction at 8:58:00 PM 1 comment:
Posted by Y Junction at 8:02:00 PM 1 comment:
ကဲ ရုပ်​ရှင်​ချစ်​သူ​တွေ အတွက်​ စိတ်​ဝင်​စား စရာ ဇာတ်​ကား​လေးတစ်​ကား လာပါပြီဗျာ။ Big Show ဆို မသိတဲ့ လူ ​တော်​​တော်​ နည်း ပါတယ်​။ ငယ်​ငယ်​ တုန်းတည်းက ရင်းနှီးပြီးသား နပန်း သမား ကြီးပါ။ The Rockတို့ကို အားကျလို့ ထင်​ပါရဲ့။ သူလည်းရုပ်​ရှင်​ဘက်​ကို ​ခြေ ချ လာပါတယ်​။ ဇာတ်​ကားကလည်း သရုပ်​​ဆောင်​​တွေကို ကြည့်​ရုံ နဲ့ ကြမ်းမယ့်​ ဇာတ်​ကားဆိုတာ သိသာ​နေပါတယ်​။ သူတတ်​နိုင်တဲ့ အတိုင်းအတာ​တွေထက်​ ​ကျော်​လွန်​ပြီး လုပ်​ရပ​စေ လက်​စား​ချေခွင့်​သာရမယ်​ဆိုရင်​ ဘယ်​အရာ​ကြောင့်​မှ ​နောက်​မဆုတ်​ဘူး ဆိုတဲ့ ​ထောက်​လှမ်း​ရေးအရာရှိ တစ်​​ယောက်​ ရဲ့ ဇာတ်​လမ်းပါ။ ဇနီးဖြစ်​သူ ကို ရာဇဝတ်​သား တစ်​​ယောက်​က သတ်​လိုက်​ပြီး​နောက်​ပိုင်းမှာ သူဟာ ရည်​ရွယ်​ချက်​ ရှိရှိနဲ့ ပြစ်​မှုတစ်​ခု ကျူးလွန်​ပြီး ​ထောင်​ထဲကို ဝင်​လိုက်​ပါတယ်​။ ရည်​ရွယ်​ချက်​က တစ်​ခုတည်း။ ​သူ့မိန်းမကို သတ်​ခဲ့သူကို ​ထောင်​ထဲကငရဲခန်းဆီ အရှင်​လတ်​လတ်​ ပို့​ပေးဖို့ပါ။ ထင်​ထားသ​လောက်​ မရိုးရှင်းတဲ့လူ့​လောက ကြီးမှာ သူဟာ ​ထောင်​တွင်းက ဒုစရိုက်​ညွန့်​​ပေါင်းအဖွဲ့​ကြီးရဲ့ အနံ့ကို ရသွားပြီး သူ့ရဲ့ပစ်​မှတ်​​တွေ များပြားလာပါတယ်​။ လက်​စား​ချေမှု ရယ်​ ဒုစရိုက်​အဖွဲ့ကြီးကို ဖြိုခွင်းဖို့ရယ်​။ ထို ​ထောက်​လှမ်း​ရေးအရာရှိ​လေး တတ်​နိုင်​ပါ့မလား ဘယ်​လို စီစဉ်​မလဲ ဆိုတာ စိတ်​ဝင်​စားဖို့​ကောင်းသလို အက်​ရှင်​ကားပီပီ အထိုးအကြိတ်​ ​အတိုက်​အခိုက်​​တွေနဲ့ ကြည့်​ရှု​သူ​တွေကို အားရ​စေမှာပါ။
IMDB 4.8 ရထားတဲ့အက်ရှင်ကားဟာ 1h:30mins ကြာမြင့်ပါတယ်။ အောက်ပါလင့်ခ်မှာ 394 MB နဲ့ ဒေါင်းနိုင်ပါပြီ။
Posted by Y Junction at 7:32:00 PM No comments:
John Matthews(The Rock) သည် သူသားဖြစ်သူဟာ သူမလုပ်သော အပြစ်တခုအတွက်တရားရုံးက ထောင်ဒဏ် ၁၀ နှစ်ကျဖို့အပြစ်ပေးခံရပါတယ်။သူ့သား အပြစ် မဲ့ကြောင်းကို ရှင်းဖို့အတွက် John ဟာ အန္တာရယ် ကြားမှာ Undercover လုပ် အသက်နဲ့ရင်းပြီး သူ့သားအတွက် စွန့်လွတ် ရုန်းကန် ရတော့မယ်အခြေနေမှာဖြစ်ပါတယ်။
The Rock ဟာ ၂၀၀၄ ခုနှစ် က The Rundown ဆိုတဲ့ Action ဇာတ်ကားနဲ့ နာမည်ရလာသူဖြစ်ပြီး Hollywood မှာ နေရာရတဲ့ မင်းသားတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။
IMDB 6.5 ရထားတဲ့အက်ရှင်ဇာတ်ကားဟာ 1h:52mins ကြာမြင့်ပါတယ်။ 515 MB နဲ့ အောက်ကလင့်မှာ ဒေါင်းနိုင်ပါပြီ။
Posted by Y Junction at 4:22:00 PM No comments:
Posted by Y Junction at 8:29:00 PM No comments:
ဒီဇာတ်ကားဟာ Mission Impossible ရဲ့ ပဉ္စမမြောက်ဇာတ်လမ်း ဖြစ်ပါတယ်။ စတုတ္ထမြောက်ဇာတ်လမ်းဖြစ်တဲ့ Ghost Protocol နဲ့လည်း အနည်းငယ် ဆက်စပ်နေပါတယ်။ Ghost Protocol မှာတုန်းက ဇာတ်သိမ်းပိုင်းမှာ နောက်ထွက်မယ့်ဇာတ်ကားအတွက် သဲလွန်စပေးခဲ့ပါတယ်။ အကြမ်းဖက်မှုတွေကို ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း နိုင်ငံတကာနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီး လှုပ်ရှားနေတဲ့ Syndicate ဆိုတဲ့ အဖွဲ့တစ်ခု ရှိပါတယ်လို့။ Syndicate ဆိုတာ နိုင်ငံတကာအကြမ်းဖက်ဂိုဏ်းဆိုပါတော့။ ဒါပေမယ့် ဘယ်သူမှတော့ အတိအကျမပြောပြနိုင်ဘူး၊ သက်သေမပြနိုင်ကြဘူး။ ဒီဇာတ်ကားမှာ မင်းသားဖြစ်သူ တွမ်ခရုစ် (အီသန်ဟန့်ခ်) က Syndicate ရှိကြောင်း သက်သေပြဖို့ ကြိုးစားရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
Ghost Protocol မှာတုန်းက IMF (Impossible Mission Force) အဖွဲ့က ရုရှားနိုင်ငံကိုသွားပြီး မော်စကိုမြို့က ခရင်မလင်နန်းတော်ကြီးကို ဖျက်ဆီးလိုက်မိတာ မှတ်မိကြမှာပါ။ တစ်ခါ စစ်ဆင်ရေးကို အချိန်မှီမဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အတွက် နျူထိပ်ဖူးတပ်ဒုံးကျည်ဟာ အင်္ဂလန်နိုင်ငံ၊ လန်ဒန်မြို့က အဆောက်အဦတစ်ခုရဲ့ ခေါင်မိုးကို ပွတ်တိုက်မိပြီး ရေထဲကျ ပေါက်ကွဲသွားတာ သတိရကြမှာပါ။ အဲဒိအဖြစ်အပျက်တွေကြောင့် တစ်ကမ္ဘာလုံးက မျက်ခုံးလှုပ်ကုန်ပြီး ပြည်သူတွေလည်း ထိတ်လန့်ကုန်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဒီ Rogue Nation ဇာတ်ကားမှာတော့ IMF ကို CIA က သူ့လက်အောက်ခံအဖြစ် သိမ်းသွင်းချင်နေပါတယ်။
IMF ကို ဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီး တွမ်ခရုစ်ရဲ့ အပေါင်းအပါတို့အုပ်စုလည်း CIA မှာ လှုပ်မရဖြစ်နေတဲ့အချိန် တွမ်ခရုစ် (အီသန်) ကိုတော့ စီအိုင်အေက မဖမ်းမိသေးပါဘူး။ အီသန်ဟာ အစွမ်းထက်တဲ့ စပိုင်တစ်ယောက်ဖြစ်လို့ CIA က ကမ္ဘာအနှံ့ကွန်ရက်ဖြန့်ပြီး အီသန်ကို လိုက်ဖမ်းပါတော့တယ်။ ဒီအချိန်မှာ အီသန်ဟာ IMF ရဲ့ နောက်ထပ် စစ်ဆင်ရေး (mission) ဟာ ဘာလဲသိရအောင် သတင်းသွားယူတဲ့အချိန်မှာပဲ ထောင်ချောက်ထဲဝင်မိပြီး အဖမ်းခံလိုက်ရပါတော့တယ်။ ဒါပေမယ့် CIA က ဖမ်းမိသွားတာ မဟုတ်ပါဘူး။ Syndicate က ထောင်ဖမ်းသွားတာပါ။
Syndicate ရဲ့ ထောင်ချောက်ဆင်ဖမ်းဆီးခြင်းကို အီသန်တစ်ယောက်ခံလိုက်ရပေမယ့် ဗြိတိသျှထောက်လှမ်းရေး၊ MI6 အေးဂျင့်တစ်ယောက်အကူအညီကြောင့် Syndicate အဖွဲ့ဆီကနေ လွတ်မြောက်လာပါတယ်။ အဲဒိနောက် အီသန်ဟာ CIA လက်က လွတ်အောင်ပြေးရင်း တစ်ဖက်ကလည်း Syndicate အဖွဲ့ကို လက်ရဖမ်းမိနိုင်ဖို့ တစ်ကိုယ်တော်ကြိုးစားရပါတော့တယ်။ Syndicate ဆိုတာ တကယ်ရှိမှန်း သက်သေပြနိုင်မှ IMF ကို ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခွင့်ရမှာပါ။ နောက်ခြောက်လအကြာမှာတော့ အီသန်ဟာ သူတစ်ယောက်တည်း မစွမ်းဆောင်နိုင်မှန်း သဘောပေါက်လာပြီး သူ့ရဲ့ သူငယ်ချင်း အပေါင်းအပါ IMF အဖွဲ့သားဟောင်းတွေနဲ့ ပြန်လည်ချိတ်ဆက်ကာ Syndicate ဆိုတာ တကယ်ရှိကြောင်း လက်ဆုပ်လက်ကိုင်နဲ့ သက်သေပြဖို့ ကြိုးစားပါတော့တယ်။
ဒီဇာတ်ကားမှာ နာမည်အကြီးဆုံး ဇာတ်ဝင်ခန်းကတော့ မင်းသားတွမ်ခရုစ် လေယာဉ်ဘေးပေါက်ကိုကိုင်ပြီး ခိုစီးပြတဲ့အခန်းပါ။ အဲဒိလေယာဉ်ဟာ Airbus A400M အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး ဒီအခန်းကို မည်သည့်ရုပ်ရှင်အထူးပြုလုပ်ချက် (special effect) မှ မသုံးထားပါ။ တွမ်ခရုစ်ဟာ ရိုက်သမျှဇာတ်ကားတိုင်းမှာ လူစားမထိုးဘဲ ရိုက်တာဖြစ်သလို ဒီဇာတ်ကားမှာလည်း ဇာတ်ဝင်ခန်းတိုင်းကို သူကိုယ်တိုင် ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ လေယာဉ်ခိုစီးပြတဲ့အခန်းကိုလည်း သူကိုယ်တိုင် သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာ တွမ်ခရုစ်ကို ဘာလို့ ဒီလောက် အန္တရာယ်များတဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်းကို ရိုက်ကူးရတာလဲလို့ မေးမြန်းတဲ့အခါ တွမ်ခရုစ်က သူဟာ လေယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ရထားတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်တာမို့ လေယာဉ်အတွင်းခန်းမှာ ထိုင်မောင်းတဲ့အရသာကို ခံစားဖူးပါတယ်။ လေယာဉ်အပြင်ဘက်မှာ တောင်ပံပေါ်မှာ ခိုလိုက်ရတဲ့ အရသာကိုလည်း ခံစားချင်လို့ပါတဲ့။
ဇာတ်ဝင်ခန်းရိုက်ကူးချိန်မှာ လေယာဉ်ဟာ အမြင့်ပေ ၅၀၀၀ မှာ ပျံသန်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒိအခန်း ရိုက်ကူးဖို့အတွက် လေယာဉ်ဘယ်တောင်ပံပေါ်မှာ ကင်မရာကို လေဒဏ်ခံနိုင်တဲ့ ဖရိန်နဲ့ ခိုင်အောင် ပြုလုပ်ခဲ့ရပါတယ်။ ရိုက်ကူးချိန်မှာ တွမ်ခရုစ်ရဲ့ မျက်လုံးဟာ ပွင့်နေဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ လေတိုက်နှုန်းအင်မတန်ပြင်းထန်ပြီး လေထဲက အမှုန်တွေကလည်း မျက်လုံးကို ခိုက်မိနိုင်ပါတယ်။ အဲဒါတွေက ကာကွယ်ဖို့အတွက် အထူးပြုလုပ်ထားတဲ့ မျက်ကပ်မှန်တစ်ခုကို ဖန်တီးခဲ့ရပါတယ်။ လေယာဉ်ခိုစီးတဲ့အခါ တွမ်ခရုစ် မျက်လုံးပွင့်နေနိုင်တာ ဒါကြောင့်ပါ။
ဒီဇာတ်ကားရိုက်ကူးချိန်မှာ တွမ်ခရုစ်ဟာ ဒဏ်ရာ ခြောက်ကြိမ်ရခဲ့ပါတယ်။ နောက်ထပ် ပြောပြချင်တာလေးကတော့ ဇာတ်ကားထဲမှာ လူကောင်းမှန်သမျှဟာ BMW ကားကိုသာ စီးကြပြီး လူဆိုးမှန်သမျှဟာ Audi ဒါမှမဟုတ် Mercedes ကိုသာ စီးကြတာကို တွေ့ရမှာပါ။
အဆုံးသတ် မှာလိုက်ချင်တာကတော့ ဇာတ်ကားထဲက ပြဇာတ်စင်ကို သေသေချာချာ ကြည့်ခဲ့ကြပါ။ သြစတြီးယားနိုင်ငံရဲ့ အဓိကစီးပွားရေးဟာ ခရီးသွားလုပ်ငန်းဖြစ်ပြီး အဓိကဆွဲဆောင်မှုက သံစုံတီးဝိုင်းတွေ၊ အော်ပရာပြဇာတ်တွေပါပဲ။ ဒီဇာတ်ကားမှာ သြစတြီးယားရဲ့ အော်ပရာပြဇာတ်တစ်ခုကို မြည်းစမ်းရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ စင်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ၊ ပရိသတ်စင် စတာတွေကို လေ့လာကြပါ။ စင်တည်ဆောက်ပုံတင်မဟုတ် အသံပိုင်းဆိုင်ရာတွေ၊ အပြင်အဆင်တွေ၊ စတူရီယိုက ပုံတူပစ္စည်းတွေကိုလည်း လေ့လာကြည့်ပါ။ မြန်မာပြည်က နိုင်ငံတော်အဆင့် အမျိုးသားပြဇာတ်ရုံနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါ။ တစ်ချိန်ချိန်မှာတော့ ကျွန်တော်တို့တွေလည်း သူတို့ကို မှီလာနိုင်ကောင်းပါရဲ့ဗျာ...။
IMDB 7.4 ရထားတဲ့နာမည်ကြီး အက်ရှင်ဇာတ်ကားဟာ 2h:11mins ကြာမြင့်ပါတယ်။ 606 MB နဲ့ အောက်ကလင့်ခ်မှာ ဒေါင်းနိုင်ပါပြီ။
Posted by Y Junction at 10:05:00 AM No comments:
လက်သံပြောင်လှတဲ့ ရဲအရာရှိဗီဂျေဟာ သူ့ရဲ့လက်သံပြောင်မှုကြောင့်ပဲ မွန်ဘိုင်းကို ပြောင်းရွှေ့ခြင်းခံရပါတယ်။ မွန်ဘိုင်းက နာမည်ကြီးမာဖီးယားဂိုဏ်း နဲ့ လက်သံပြောင်တဲ့ ရဲအရာရှိတို့ ထိပ်တိုက်တွေ့ကြသောအခါ...
ခပ်ကြမ်းကြမ်းတိုက်ကွက်တွေနဲ့ ဘောလီးဝုဒ်ဇာတ်ကားဟာ 2h:17mins ကြာမြင့်ပြီးတော့ 394.3 MB နဲ့ အောက်ကလင့်ခ်မှာ ဒေါင်းယူကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီခင်ဗျာ..။
Labels: Action, Bollywood, Thriller
Posted by Y Junction at 12:59:00 AM No comments:
DC8' လို့ခေါ်တဲ့အလွယ်တကူသယ်ယူနိုင်တဲ့ nulear စက်တစ်လုံး တောင်ကိုရီးယားကနေ အခိုးခံလိုက်ရပါတယ်။ခိုးယူသွားသူက ဒုစရိုက်သမား ချန်ချင်းဆိုသူနဲ့၎င်းရဲ့အပေါင်းအပါတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ယင်းလက်နက်ကို ဟောင်ကောင်မှာ လက်လွှဲယူမယ့်သတင်းရထားတဲ့အတွက် အကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းရေးအဖွဲ့မှ Lee ဆိုသူက စစ်ဆင်ရေးအဖွဲ့တစ်ခု ဖွဲ့လိုက်ပါတယ်။ထိုအဖွဲ့မှာပါဝင်သူတွေကတော့ ရဲအရာရှိ ဖန်၊အကြံပေးအနေဖြင့် ရူပဗေဒပရော်ဖက်ဆာ ရွှီ နဲ့ တောင်ကိုရီးယားမှ လက်နက်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေဖြစ်တဲ့ ချွိုင်နဲ့ ပေါ့ တို့ပါဝင်ပါတယ်။ Lee ဦးဆောင်တဲ့ပညာရှင်တွေပါဝင်တဲ့ ထိုစစ်ဆင်ရေးအဖွဲ့ဟာ ဘယ်လိုပင်ကြိုးစားအားထုတ်ပေမယ့်လည်း နောက်ကွယ်ကနေ ညွှန်ကြားနေတဲ့ ဒုစရိုက်ခေါင်းဆောင် Helios က Lee တို့ထက် ခြေတစ်လှမ်းသာနေတဲ့အခါမှာတော့...
(ဟောင်ကောင်နဲ့တောင်ကိုရီးယား ပူးပေါင်းရိုက်ကူးထားတဲ့ အက်ရှင်ကားဖြစ်သလို ပါဝင်ထားတဲ့ မင်းသားမင်းသမီးတွေကလည်း တကယ့်နာမည်ကြီးတွေပဲမို့ လက်မလွတ်စေဖို့ သတင်းကောင်းပါး တင်ဆက်လိုက်ပါတယ် )
ရုပ်ရှင်အညွှန်း - SKYNET ASIAN MOVIES
IMDB 5.5 ရထားတဲ့ဇာတ်ကားဟာ 1h:58mins ကြာမြင့်ပါတယ်။ 547 MB နဲ့ အောက်ပါလင့်ခ်မှာ ဒေါင်းယူကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ။
Labels: Action, Asia, China, Crime, Fantasy, Korea
တက္ကသိုလ်အတူအောင်ခဲ့တဲ့ သူငယ်ချင်းလေးယောက်ဟာ စီးပွားအတူလုပ်ဖို့ စတင်ပါတော့တယ်။ သူတို့ရဲ့ လုပ်ပုံလုပ်နည်းတွေဟာ ရှေးရိုးအစဉ်အလာတွေကို ချိုးဖျက်ပြီး ကိုယ်ပိုင်ပုံစံမျိုးနဲ့ လုပ်ကိုင်တဲ့အခါမှာ အောင်မြင်မှုတွေရှိသလို အတိုက်အခိုက်တွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ရပါတော့တယ်။ ဟာသ၊ အချစ် စတဲ့ရသမျိုးကို ခံစားရမှာပါ။ အပြည့်အစုံကိုတော့ ဆက်လက်ရှုစားကြပါလို့
ဇာတ်ကားထဲ့က မင်းသမီး Anushka ဟာ မေလ ၁ရက်နေ့ ၁၉၈၈ မှာ မွေးဖွားပြီး သူမရဲ. ပထမဆုံးဇာတ်ကားက မင်းသားကြီး ရှရွတ်ခန်းနဲ့ Rab Ne Bana Di Jodi (2008) ဇာတ်ကားပါ ။ ဒါ့အပြင်သူမဟာ Badmaash Company, Band Baaja Baraat, Ladies vs Ricky Bhal, Jab Tak Hai Jaan, and Patiala House. ဇာတ်ကားတွေမှာလည်း ခေါင်းဆောင်မင်းသမီးအဖြစ် ပါဝင်ထားပါသေးတယ်။ ဒါ့အပြင် နာမည်ကျော် PK မှာလည်း ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသူပါ။
IMDB 6.0 ရထားတဲ့ ဘောလီးဝုဒ်ဇာတ်ကားဟာ 2h:22mins ကြာမြင့်ပါတယ်။ 655 MB နဲ့ အောက်ကလင့်ခ်မှာ ဒေါင်းယူကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ။
Posted by Y Junction at 10:33:00 AM No comments:
Labels: Bollywood, Comedy, Crime, Drama
ဒီဇာတ်ကားလေးကတော့ ထွေထွေထူးထူး ညွှန်းစရာ မလိုတော့ဘဲ အောင်မြင်သူတစ်ဦး၏ ဘ၀ကောက်ကြောင်းကိုသာ ပရိသတ်ဆီ ထိုးကျွေးလိုက်တဲ့ ဇာတ်ကားမျိုးပါ။ IMDB 7.3/10 အထိရရှိထားတာကြောင့်လည်း ရိုက်ကူးတင်ဆက်ပုံမျိုးက ပရိသတ်အကြိုက်တွေ့မိမှာပါ။
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံရဲ့ Nation's Fist လို့ လူသိများလာခဲ့တဲ့ ပက်ကွီနိုဟာဖြင့် လက်ဝှေ့အတတ်ပညာ၌ ထူးချွန်သူတစ်ဦးပါ။ ပြိုင်ပွဲ ၆၅ ပွဲအနက် ၅၇ ပွဲအနိုင်ရယူခဲ့ပြီး ၆ ပွဲရှုံး သရေ ၂ပွဲ ရရှိအောင်မြင်ထားပါတယ်။ သူရဲ့ လက်ဝှေ့သက်တမ်းအဆုံးကိုလည်း နောက်တစ်ပွဲမှာ ရပ်တန့်လိုက်တော့မယ် ဟုလည်း သတင်းထွက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ သန်မာတဲ့လက်သီးတို့နှင့်အတူ ပြုံးရောင်သမ်းသော မျက်နှာတို့ ပိုင်ဆိုင်ထားသူ ပက်ကွီနိုရဲ့ ဘ၀ကလည်း စိတ်ဝင်စားဖွယ် ကောင်းလှလွန်းလှပါတယ်။ လက်ဝှေ့တွင်သာမက ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၏ အောင်လွှတ်တော် အမတ် တစ်ဦးအနေနဲ့ပါ ကျော်ကြားခဲ့တဲ့ ပက်ကွီနို အကြောင်းကိုတော့ ဒီဇာတ်ကားကြည့်ပြီး ဗဟုသုတတိုးရဦးမှာပါ... “ အောင်မြင်သူတွေရဲ့သမိုင်းမှာတော့ ခရောင်းလမ်းအမြဲရှိတယ် "ဆိုသလို ပက်ကွီနိုရဲ့ အောင်မြင်စေတဲ့ သဘောတရားတွေကိုလည်း ပရိသတ်ကြီး ဝေဖန် ထောက်ရှု ရင်း အတုယူနိုင်ကြပါစေ။ အားလုံးပဲ ကြည့်ရှုအားပေးလိုက်ကြပါဦးနော်..
ရုပ်ရှင်အညွှန်း - လင်းခယံ
IMDB 7.2 ရထားတဲ့ မန်နီပက်ကွီယိုဇာတ်ကားဟာ 1h:28mins ကြာမြင့်ပါတယ်။ 408 MB နဲ့ အောက်ကလင့်ခ်မှာ ဒေါင်းနိုင်ပါပြီ။
Posted by Y Junction at 11:34:00 PM No comments:
Labels: Asia, Biography, Documentary, Hollywood, Sport
Posted by Y Junction at 10:16:00 PM No comments:
Posted by Y Junction at 7:24:00 AM No comments: